यर्मिया 13 ERV-NE - पटुकाको संकेत - Bible Gateway
यर्मिया 12यर्मिया 14
यर्मिया 13 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
13 परमप्रभुले मलाई जे भन्नुभयो त्यो यही हो: “यर्मिया, जाऊ अनि सुतीको लुगा किनेर। तिम्रो कम्मरमा वरिपरि बाँध। यसलाई भिज्न नदेऊ।”
2 यसकारण परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मैले सुती लुगा ल्याएँ अनि कम्मरमा वरिपरि बाँधे।3त्यसपछि दोस्रो पल्ट परमप्रभुको सन्देश मकहाँ आयो।4सन्देश यस्तो थियो “यर्मिया, तिमीले किनेका पटुका बाँध र परात नदीमा जाऊ। अनि त्यो पटुका चट्टानहरू चर्केको ठाउँमा लुकाऊ।”
5 यसकारण म परात नदीतर्फ लागें परमप्रभुले दिनुभएको आदेश अनुसार पटुका लुकाँए।6धेरै दिन पछि, परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “अब यर्मिया, परात नदीतर्फ जाऊ। पटुका ल्याऊ जुन मैल तिमीलाई त्याहाँ लुकाउनु भनेको थिएँ।”
7 यसकारण म परात नदीमा गएँ अनि जहाँ मैले पटुका लुकाएको थिएँ त्यो ठाँउमा खनें। मैले पटुका पाएँ तर त्यो मक्किएर काम नलाग्ने भएको थियो।
8 त्यसपछि परमप्रभुको सन्देश मकहाँ आयो।9परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, “त्यसरी नै म यहूदाको गर्व र यरूशलेमको महागर्व नष्ट पार्नेछु। 10 यी दुष्ट मानिसहरूले मेरा वचनहरू सुन्न अस्वीकार गर्छन्। तिनीहरू हठ्ठी छन्। तिनीहरू अन्य देवताहरूको अनुशरण गर्छन् र तिनीहरूको पूजा गर्छन्। ती मानिसहरू पटुका झैं नष्ट हुनेछन्। 11 एकजना मानिसले आफ्नो कम्मरमा पटुका कस्सेर बाँध्छ। त्यस्तै प्रकारले, म यहूदाका र इस्राएलका मानिसहरूलाई कस्सेर बाँध्नेछु।” यो सन्देश परमप्रभुबाट हो। “मैले त्यसो गरेको कारण ती मानिसहरूलाई म पट्टि खिंच्न र आफ्नो नाउँ प्रशंसा र महिमाका निम्ति आफ्नो मानिसहरू बनाउनु हो तर तिनीहरूले सुनेन्।”
12 “तिनीहरूलाई यो सन्देश भन: ‘परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले भन्नु भएको छ हरेक दाख-मशक दाखरसले भर्नु पर्छ।’ ती मानिसहरूले तिमीलाई भन्छन्, ‘वास्तवमा हामी जान्दछौं हरेक दाख-मशक दाखरसले भर्नु पर्छ।’ 13 तब तिमीहरू तिनीहरूलाई भन्नेछौ, ‘यही नै त परमप्रभुले भन्नुहुन्छ यस देशमा भएका सबै असाहयहरूलाई म जँड्याह जस्तो बनाउने छु। म ती राजाहरूको बारेमा भनिरहेछु जो दाऊदको राजगद्दीमा बस्छन्। म ती पूजाहारीहरू, अगमवक्ताहरू र यरूशलेममा बस्नेहरू सबै मानिसहरूका बारेमा भनिरहेको छु। 14 तिनीहरूलाई एक-अर्कामा चकनाचूर पार्नेछु, बाबु छोराहरूमा पनि आपसमा चक्‌नाचुर हुनेछन्’ परमप्रभु भन्नुहुन्छ ‘तिनीहरूका निम्ति म दु:खी हुने छैन अनि म तिनीहरूमाथि क्षमा गर्ने छैन। यहूदाका मानिसहरूलाई नष्ट पार्नु म रोकिने छैन्।’”
15 सुन र ध्यान देऊ।
परमप्रभु तिमीहरूसित बोल्नु भयो।
16 परमेश्वर आफ्ना परमप्रभुलाई सम्मान् गर।
उहाँलाई प्रशंसा गर नत्रता उहाँले अन्धकार ल्याउँनु हुनेछ।
तिमीहरू अन्धकारको पहाडहरूमा झर्न अगि प्रशंसा गर,
यहूदाका मानिसहरू तिमीहरूले उज्यालोको आशा गरिरहेछौ।
तर परमप्रभुले डरलाग्दो अन्धकार ल्याउँनु हुनेछ।
उहँले उज्यालोलाई बद्लेर बाक्लो अन्धकार बनाउनु हुनेछ।
17 यहूदाका मानिसहरू यदि तिमीहरूले परमप्रभुको कुरालाई ध्यान दिएनौ भने।
म लुक्छु अनि रून्छु।
तिम्रो गर्वले मलाई रूने बनाउँछ।
म धेरै जोडले रूनेछु।
मेरो आँखाबाट आँसु बाढी झैं बग्नेछ?
किनभने परमेश्वरको भेंडाको बथान [a] पक्राऊ पर्नेछ।
18 यी कुराहरू राजा र राज-मातालाई भन,
“राजगद्दीबाट तल झर तिमीहरूको गौरवशाली मुकुट,
तिमीहरूको शिरबाट खसेको छ।”
19 नेगब मरुभूमिमा भएको शहरहरूका प्रवेशद्वारहरू बन्द छन्,
अनि कसैले पनि तिनीहरूलाई खोल्न सक्तैनन्।
यहूदाका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई निर्वासन गरियो।
तिनीहरूलाई कैदी जस्तै लगियो।
20 हे यरूशलेम हेर! ,
शत्रुहरू उत्तरबाट आइरहेकाछन्।
परमप्रभुले दिनुभएको सुन्दर बथान,
तिम्रो ती भेंडा़का बथानहरू कहाँ छन्?
21 यदि बथानको विषयमा परमप्रभुले सोध्नु भए
तिमी के भन्नेछौ?
तिमीहरूले सिकाउनु पर्थ्यो।
तिमीहरूले अगुवाई गरिरहेको हुनु पर्ने।
के तिमी सुत्केरी पीडामा परेकी स्त्रीहरू झैं छैनौ?
22 यदि तिमीहरू स्वयंलाई सोधे,
“किन मलाई यस्तो नराम्रो कुराहरू भयो?”
तिमीहरूकै पापको कारणले,
तिम्रो पोशाकहरू च्यातियो
अनि तिमीहरू अपमानित भयौ।
23 जसरी एउटा चितुवाले आफ्नो छालाको थोप्ले दागहरू बद्लाउनु सक्तैन
त्यसरी नै एकजना कालो वर्णको मानिसले आफ्नो वर्ण बद्लिन सक्तैन।
यसर्थ तिमी दुष्टकर्मीहरू
कहिल्यै परिवर्तन हुन र असल गर्न सक्तैनौ।
24 “मरुभूमिको हावाले बालुवा उढाए झैं
म तिनीहरूलाई तितर-बितर पारिदिनेछु।
25 मेरो योजनाभित्र गाभिएको
यो तिम्रो भाग्य हो।”
“यस्तो संयोग किन घट्यो?
किनभने तिमीहरूले मलाई त्याग्यौ
अनि झूटो देवताहरूमाथि भरोसा गर्यौ।
यो सब परमप्रभुले भन्नु भयो।
26 यरूशलेम, म तिम्रो लुगा
अनुहार सम्म तानी दिनेछु
ताकि प्रत्येकले तिम्रो लाज देखोस्।
27 मैले तिमीहरूलाई घिनलाग्दा काम गरेको देखेको छु।
मैले तिमीहरूलाई वेश्यावृति झैं पहाडमा,
र मैदानमा आफ्नी प्रेमिकाहरूलाई,
अति आनन्दसित व्यभिचार काममा मस्त भएको देखेको छु।”
यर्मिया 13:17 भेंडाको बथान “परमप्रभुका मानिसहरू” वा “यहूदाका मानिसहरू।”